Smartmi Air Purifier, onye na-asachapụ nke ọma nwere nzacha H13 | Akụkọ Ngwa
Smartmi Air Purifier, onye na-asachapụ nke ọma nwere nzacha H13
Miguel Hernandez | 20/11/2021 10:00 | Ngwa, General, Nyocha
Ịdị ọcha ikuku abụrụla ihe na-eche n'oge a mana ọ dịchaghị mkpa, ebe a anyị enyochala ọtụtụ ihe nchacha nke na-enyere anyị aka idobe ụlọ anyị ọcha dị ka o kwere mee na enweghị ihe nfụkasị ahụ, ihe a ga-enwe ekele n'oge ndị a. Akara akara Xiaomi nke nọnyere anyị ogologo oge enweghị ike ịnwụ na katalọgụ nyocha anyị.
Anyị na-enyocha ihe ọhụrụ Smartmi Air Purifier, ihe nchacha ikuku zuru oke na imewe na arụ ọrụ yana nzacha H13 na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ dị ukwuu. Ka anyị leba anya na ngwaahịa a nke dị n'etiti ọnụ ahịa n'ihe gbasara ụdị ngwaọrụ ndị a iji hụ ma ọ bara uru n'ezie ma ọ bụ na ọ bụghị.
1 Nhazi na ihe: Ìhè mana nrụzigharị dị ịrịba ama
3 Ikike nke ịdị ọcha
Nhazi na ihe: Ìhè mana nrụzigharị dị ịrịba ama
Dị ka ị mara nke ọma, ngwaahịa Smartmi gara aga nke nha na oke a bụ square zuru oke, nwere akụkụ gbara okirikiri, ee, mana tere aka na imewe nke Smartmi Air Purifier nyere. Otú ọ dị, a na-echekwa palette agba omenala, dịka ọmụmaatụ. N'agbanyeghị ihe ndị a niile, a na-edobe plastik matt na-acha ọcha dị ka isi ihe na-ewu ụlọ, na-ejikọta ya na nhazi cylindrical kpamkpam nke na-eme ka ọ dị ka kọmpat na, karịa ihe niile, na-arụ ọrụ nke ọma n'akụkụ niile.
Akụkụ: 266 x 265 x 535 mm
Ibu ibu: 5,2 n'arọ
Ọ masịrị gị? Ị nwere ike ịzụta ya na ọnụahịa kacha mma na Amazon
Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na-echetara anyị i3000, onye na-asachapụ Philips bụ nke yiri ya, ma site na imewe na n'eziokwu na panel LED dị na mpaghara elu na ọ bụ nke na-enye anyị ohere ịhazigharị paramita nke ikuku ikuku. Akwụkwọ ntuziaka. Ntụnyere bụ asị, ee, ma mgbe anyị na-enyocha ngwaahịa nke a kpọmkwem nso, anyị enweghị nhọrọ ma na-kpọtụkwa ndị na-kasị emetụta. N'okwu n'ozuzu, dị ka ngwaahịa niile nke Xiaomi sub-brand, anyị na-eche ihu na ngwaọrụ emechara nke ọma nke na-atọ ụtọ na anya na aka.
Nke a Smartmi Ikuku Purifier nwere dị ka ọ na-apụghị ịbụ ma ọ bụghị na WiFi Njikọta na nke a na-enye anyị ohere ijikwa ihe nchacha site na ngwa Xiaomi Mi Home dị maka iOS na gam akporo, Na mgbakwunye na ịmekọrịta ya na ndị na-enyere aka mebere mebere, o doro anya na anyị na-ekwu maka Amazon Alexa na Google Assistant, ọ bụghị otú ahụ na Siri ma ọ bụ ndị sitere na Apple HomeKit, n'agbanyeghị na ngwaahịa Xiaomi ndị ọzọ nwere njikọ ahụ. Na mgbakwunye na nke a na njikwa akwụkwọ ntuziaka n'onwe ya, anyị nwere ọnọdụ «AUTO» nke na-arụ ọrụ ọgụgụ isi nke ịdị ọcha dị ka sensọ dị iche iche na-ahazi na azụ nke Smartmi Air Purifier, ọnọdụ m na-akwadokarị. .
Anyị nwere ọtụtụ ọkwa ventilashion, Ebe ọ bụ na ọnọdụ mkpọtụ dị ala na-enye gburugburu 19 dB, ezuru ịnụ onye fan mana ọ bụghị ịkpata nsogbu n'ụbọchị. N'ihi na abalị anyị nwere «abalị mode» nke ukwuu ókè nke a na-agba na mma ezumike.
N'otu ụzọ ahụ, iji na-emekọrịta ihe na ngwaọrụ anyị nwere ike iji uru ma ọ bụ ihuenyo mmetụ ya, ma ọ bụ usoro gestural site na sensọ nso nke ahụ ga-eme ka anyị nwee ike ime mgbanwe ndị bụ isi na-enweghị imetụ aka panel na mpaghara elu. Mmekọrịta anyị na usoro mmegharị ahụ adịchaghị mma, m ga-ekwu na m na-ahọrọ mgbanwe site na ngwa ma ọ bụ ozugbo site na imetụ ihuenyo ahụ aka.
Ikike nke ịdị ọcha
Ebe a Smartmi Air Purifier na-eme ndị ọzọ. Iji malite, anyị nwere ihe nzacha HEPA H13 nke nwere ike ịmịnye ísì ọjọọ, anwụrụ ọkụ, ihe ndị TVOC (nke a na-emekarị nke ngwaahịa nhicha) na n'ezie pollen. Na panel anyị ga-enwe ike ịchọta ozi gbasara ma PM2.5 nke anyị nwere na ikuku na ihe ngosi ọkwa TVOC, na mgbakwunye na ihe ngosi ọzọ nke ọnọdụ arụ ọrụ, ọnọdụ okpomọkụ na n'ezie index nke iru mmiri dị na ebe ikuku na-asachapụ.
N'okwu ndị a ma na-erite uru nke ihe mmetụta abụọ "nwere ọgụgụ isi" ya, anyị na-achọpụta na iji ihe dị ka ihe dị ọcha ikuku iri na abụọ kwa elekere, ngwaọrụ a nwere ike ịsacha gburugburu 15 square mita n'ime nkeji ise, ya mere, a ga-akwado nke a karịsịa maka okpukpu abụọ. ime ụlọ ma ọ bụ obere ime ụlọ, ọ dịghị maka nnukwu ọnụ ụlọ zuru oke ma ọ bụ paseeji. Agbanyeghị, nzacha carbon nke arụ ọrụ nke ọma na-eji usoro atọ:
Ihe nzacha nke mbụ maka uzuzu, ntutu na oke irighiri ihe
Ezi HEPA ihe nzacha H13 nke na-enyocha 99,97% nke ụmụ irighiri ihe na-ewepụ ọbụna nje bacteria na nje.
Unyi na-arụ ọrụ iji nweta formaldehyde, anwụrụ ọkụ na ísì ọjọọ yana VOC.
Na arụmọrụ anyị ga-ekwu maka 400 m3 kwa awa maka pollen na otu maka ahụ CADR, ebe anyị nwere ogologo mpempe akwụkwọ nzacha nke 20.000 cm3. N'ụzọ nke a, ọ ga-enyocha 99,97% nke ụmụ irighiri ihe ndị na-erughị 0,3 nanometer, yana ihe ndị ọzọ anyị kwurula na mbụ.
N'agbanyeghị ikike ngwaahịa a, enweghị m ike ịchọta nzacha ahụ iche, Nke akọwapụtaghị ịdịte ya yana ngwa Mi Home ma ọ bụ ngwaọrụ ịdọ aka na ntị nke ihuenyo ga-ejikwa ya, ihe ihere. Echere m na ọtụtụ ndị nkesa nke nzacha ga-abịarute, ugbu a enweghị m ike ịkọwapụta ma ọ bụ nke ego ma ọ bụ ebe ire ere ebe ị nwere ike ịzụta ha, site n'echiche m ihe dị mkpa mgbe ị na-azụta ngwaahịa nke àgwà ndị a, n'agbanyeghị ogologo oge nzacha ahụ nwere ogologo ike.
Anyị na-eche ihu nchacha nke teknụzụ na akwụkwọ na-enye ezigbo njirimara, ka mma ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume karịa ndị na-agba ya n'otu ọnụahịa na ọbụna dị elu. Anyị nwere maka 259 euro ihe dị ọcha zuru oke nke nwere njirimara niile mmadụ ga-atụ anya na ngwaahịa dị otú ahụ. N'ụzọ dị mwute, enweghị m ike ịhapụ isi ihe na-adịghị mma nke na enweghị m ike ịchọta akụkụ ahụ mapụtara na ebe a na-ere ere dị ka PC Components ma ọ bụ Amazon, nke bụ ntụaka na Spain, karịa eziokwu na ha nwere ike dị na saịtị dị ka AliExpress.
Smartmi ikuku purifier
Ihe na: November 20 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: November 13 nke 2021
Njikọta na atụmatụ
Achọtaghị m ngwa ngwa ngwa ngwa
Enweghị nnweta na weebụsaịtị bụ isi ugbu a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Smartmi Air Purifier, onye na-asachapụ nke ọma nwere nzacha H13
Laptop Lenovo IdeaPad Flex 5 nwere mbelata € 100,99